Ny firaketana ambany ambany dia kely eo amin'ny varotra iPad | Vaovao IPhone
Alvaro Fuentes | | iPad, iPad Pro, About us
Raha ny angom-baovao farany dia vonona ny hametraka iPad Pro vaovao i Apple amin'ny tapany voalohan'ny taona 2017. Na izany aza, toa tsy dia ampy loatra izany hampijanona ny filatsahan'ny takelaka Apple, izay latsaka amin'ny ambaratonga ambany indrindra. lalana mankany amin'ny ambany ambany mandrakizay, hoy ny tatitra vaovao iray izay niseho.
Raha mitanisa loharanom-pahalalana famatsiana, ity fampahalalana ity dia milaza fa ny fangatahana chips ho an'ny iPad dia nitohy nihena, izay midika fa ny fandefasana fitaovana iPad ho an'ny 2016 dia mety ho sahirana hahatratra 40 tapitrisa unit total. Saingy tsy mijanona eo io, ny fironana dia ratsy ary mety ho ratsy kokoa aza.
Ny fihenan'ny fangatahana chip dia vaovao ratsy, indrindra mandritra ny vanim-potoana fialantsasatra izay matetika ny iPad no mpivarotra ambony indrindra ho an'i Apple, porofon'izany ny zava-misy fa tamin'ny taon-dasa dia fahombiazana lehibe izany. Mandritra ny fialantsasatra amin'ireo daty ireo izay taona maro, iPad iray amidy isan-tsegondra.
Araka ny tatitra vaovao, navoakan'i Digitimes (fa na dia manana tantara ratsy momba ny tsaho momba ny vokatra aza izy ireo, dia mety ho marina ny fampahalalana rehefa milaza izy ireo fa avy amin'ny loharano ao amin'ny rojom-panomezana izany), tsy azo inoana ny mahita fitomboan'ny kaomandin'i Apple raha tsy 2018, rehefa hamoaka vokatra vaovao ry zareo.
Mifanaraka amin'izay nolazain'ny mpandalina KGI Ming-Chi Kuo (fantatra tsara momba an'i Apple) tato ho ato. Kuo dia nanolo-kevitra fa ny fandefasana dia hidina 10 ka hatramin'ny 20 isan-jato amin'ny taona amin'ny 2017 ary ireo fitaovana vaovao ireo dia mety tsy ho maotera lehibe mitombo amin'ity faritra ity. Voalaza ao ihany koa fa hampiditra fanovana "revolisionera" amin'ny iPad i Apple amin'ny taona 2018, ao anatin'izany ny fandraisana ireo takelaka AMOLED. Ny taranaka iPads manaraka (ireo tsy AMOLED) dia antenaina hambara amin'ny volana martsa 2017.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny firaketana ambany ambany dia kely eo amin'ny varotra iPad
Radarr6 dia hoy izy:
Na ahoana na ahoana, ny fampiasana ny efijery OLED dia tsy azo faritana hoe "revolisionera". Marika maro no nampiasa azy ireo nandritra ny taona maro.
Apple mety mandoro ny cartridges farany azy: izao dia mbola afaka mampiditra "fanatsarana" toa ny famelana USB drive, karatra SD, na famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana ivelany izay notapahiny, izay hitazona azy mandritra ny taona vitsivitsy.
Saingy tsy ny fampiharana fampiharana vaovao…. na dia azony atao batemy aza izy ireo amin'ny iray amin'ireo anarana mpamorona izay mitarika ny olona rehetra hieritreritra fa azy ilay hevitra. Ny efijery SmartBlack iOLED RetinaX2 (ny vahaolana «retina», izay tsy mihoatra ny 1280 * 720 teboka, dia ampiasain'i Apple sy ny terminal ambany farany ambany ihany).
Nilaza i Tim Cook taorinan'ny nahafatesan'i Jobs fa tsy tokony hanahy ny amin'ny hoavin'ny orinasa ireo mpankafy Apple fa talohan'ny nandaozany azy dia "efa navelany tsara ny vata fampangatsiahana" miaraka amin'ny hevitra tokony hovolavolaina. Miadana. Amin'ny fatra kely, fery tsara ny "fanavaozana" tsirairay alohan'ny handefasana ny manaraka.
Mazava ho azy fa tsy dia be loatra ny hevitra. Na angamba ireo hevitra tamin'izany dia tsy mifanaraka amin'ny tsena miova toy ny an'ny finday.
Valiny tamin'i Radarr6
Raha ny fahalalako azy dia manana vahaolana amin'ny 2048 x 1536 ny iPad…. Tsy haiko hoe avy aiza ianao no ampiasain'izy ireo amin'ny iPads io vahaolana io, izay no resahina ao amin'ilay lahatsoratra.
Ary raha miresaka momba ny iPhone ianao, ireo 4,7 ″ dia mampiasa in-1.334 750 sy ny Plus 1920 × 1080 ……
ka ny marina, mbola tsy hitako ireo 1280 × 720….
Apple dia mampiasa vahaolana 2048 × 1536 amin'ny iPads, izay no resahina ao amin'ity lahatsoratra ity.
Raha miresaka momba ny iPhone ianao dia ampiasao 1344 × 750 ao amin'ny 4,7 ″ sy 1920 × 1080 ao anatin'ny plus.
Tsy haiko hoe avy aiza no ahazoanao io vahaolana io, saingy mazava fa tsy mampiasa azy io amin'ny vokatra i Apple.